Best Nano mgbanwe
Best Buy price Nano $ 0.950780 NANO/USDT WazirX
Ahịa ahia kacha mma Nano $ 1.04 NANO/BTC CoinBene
A na-ahụrịrị ọkwa kacha mma Nano na usoro ego ego abụọ na-agbanwerịta mgbanwe. Ọnụego mgbanwe ego ego Nano nke banki adighi atọrọ ka ọ dị na ego mbu, kama ọ bụ kpebisiri ike maka azụmahịa ọ bụla n'etiti ndị sonyere mgbanwe ahụ. Na mgbanwe ego ego ọ bụla, nguzozi nke ndi na-azu ahia na ndi na ere ahia nke Nano dị iche. N'ihi ya, Nano ọnụego mgbanwe maka ebe azụmaahịa dị n'ịntanetị dị iche.
Best Nano obere akpa
June 06, 2020 Kachasị mma ịzụta Nano na June 06, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Nano na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Elekere Nano obere akpa bụ nyocha nke ndị nwe ego ego. Ejiri obere akpa ego crypto dị ka ụdị ndị a: mfe, ntụkwasị obi na nchekwa. Mpempe akwụkwọ kachasị mma Nano nwere ntụkwasị obi kacha mma yana nchekwa kacha mma. Ejiri ezigbo mgbanwe ego ego Nano n'oge ahọpụtara site na ịmụ nsonaazụ nke ọnụego azụmaahịa maka ịzụta na ire nke ego ego.
Ụlọ ahịa Nano kacha mma
Ọtụtụ mgbe ọnụego mgbanwe kachasị mma kwesịrị ka atụ anya ya na onye mwepu ego ego nke enwere ọnụahịa zụrụ ahịa nke Nano. Nano ọnụego kachasị mma na 06/06/2020 egosiputara na tebụl nke ọnụahịa azụmaahịa niile maka mgbanwe taa. Kachasị mma Nano ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa bụ 06/06/2020 n'isi nke ibe. Ọnụ ego kachasị mma Nano - gbanwere na dollar, maka ịdị mfe ntụnyere na ọnụego sitere na isi mmalite ndị ọzọ.
BTC USDT ETH USD EUR DOGE BCH
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Nano nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Kraken NANO/EUR $ 1.01 $ 132 808 -
Kraken NANO/BTC $ 1.01 $ 77 043 -
Kraken NANO/USD $ 1 $ 74 593 -
Kraken NANO/ETH $ 1 $ 36 072 -
Binance NANO/BTC $ 1.01 $ 1 703 668 -
Binance NANO/USDT $ 1.01 $ 1 472 098 -
Binance NANO/ETH $ 1.01 $ 147 397 -
HitBTC NANO/BTC $ 1.02 $ 202 977 -
HitBTC NANO/USDT $ 1.01 $ 83 069 -
HitBTC NANO/ETH $ 1.01 $ 12 742 -
OKEx NANO/USDT $ 1.03 $ 320 243 -
OKEx NANO/BTC $ 1.01 $ 146 133 -
OKEx NANO/ETH $ 1 $ 106 413 -
CoinEx NANO/BTC $ 1.01 $ 139 749 -
CoinEx NANO/USDT $ 1.02 $ 97 924 -
CoinEx NANO/BCH $ 1.02 $ 87 007 -
Huobi Korea NANO/USDT $ 1.02 $ 45 -
Huobi Korea NANO/BTC $ 1.02 $ 45 -
Huobi Korea NANO/ETH $ 1.02 - -
Huobi Global NANO/USDT $ 1.01 $ 243 404 -
Huobi Global NANO/BTC $ 1.01 $ 134 353 -
Huobi Global NANO/ETH $ 1.01 $ 15 893 -
Dex-Trade NANO/BTC $ 0.98 $ 242 123 -
Dex-Trade NANO/USDT $ 0.98 $ 88 889 -
Dex-Trade NANO/ETH $ 0.98 $ 45 121 -
KuCoin NANO/BTC $ 1.01 $ 59 452 -
KuCoin NANO/USDT $ 1.02 $ 33 479 -
KuCoin NANO/ETH $ 1.01 $ 24 630 -
Mercatox XRB/BTC $ 1 $ 642 037 -
Mercatox XRB/DOGE $ 0.98 $ 4 581 -
Gate.io NANO/USDT $ 1 $ 3 129 -
Gate.io NANO/BTC $ 1.01 $ 1 009 -
CoinDCX NANO/USDT $ 1.02 $ 6 835 -
CoinDCX NANO/BTC $ 1.02 $ 4 386 -
CoinBene NANO/BTC $ 1.04 $ 2 249 244 -
Binance.US NANO/USD $ 1 $ 202 882 -
Bitvavo NANO/EUR $ 1.03 $ 85 699 -
DragonEX NANO/USDT $ 1.02 $ 294 092 -
Coinall NANO/BTC $ 1 $ 41 -
WazirX NANO/USDT $ 0.95 $ 2 132 -
A na-edobe ọnụego ịzụta kacha mma Nano mgbe ịzụrụ ego na-abụghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ. Anyị na-egosipụta oge kacha mma Nano ọnụego zụta nke dollar maka ntụnyere dị mfe. Na ibe dị n'akụkụ nhọrọ kacha mma Nano, ego ndị ahụ na-enye ọnụahịa azụmaahịa kacha mma na-egosipụta. Ọnụahịa kachasị mma nke Nano maka taa - anyị na-egosi na elu peeji nke ọrụ a. A na-egosi dollar Nano na dollar.
Ulo ahia “uzo abuo” gosiputara ego nke enwere ike ree Nano. Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire Nano edepụtara na tebụl dị na peeji a. Edebere mgbanwe ndị a na ọnụego kacha mma a gbanwere na dollar mgbe ị na-azụ ma na-ere Nano gaa ego ndị ọzọ na cryptocurrenrency. A na-emelite peeji maka ụdị mgbanwe kacha mma maka ịzụ na ire Nano. ahia crypto na - aga n'ihu.